Zvimiro Zvinogadzira Gmail Yakasarudzika ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 506
Izvo zvitsva mune yekupedzisira Inguva yakareba sei yakave neemail yeGoogle sevhisi, kuve nekumisikidza Gmail. Gmail maemail ndiwo anonyanya kushandiswa uye anozivikanwa pasi rese nenhamba yakakodzera yevashandisi zviuru mazana matanhatu.
Parizvino Gmail Iri kuwedzera zuva nezuva, uye izvi zvakaita kuti Google ivandudze chinongedzo cheGmail padanho nyowani, senge yekuwedzera maficha matsva nemamwe magajeti ari mavhezheni matsva.
Zvisinei nekuvapo kweimwe Mapuratifomu anoita e-mail masevhisi senge Outlook, Microsoft, Yahoo Mail uye ivo vanoenderera nhasi, zvisinei ivo havafananidzi kupa yekuchengetera, kutsvaga uye kuronga mhinduro sezvinoita Gmail.
Kuchengeta izvo mabhenefiti ane gmail uye kuti ingave yakabudirira sei, Google kuburikidza nekupihwa kwevashandisi inofanirwa kutengesa kushambadza, kuisa nhau zvinoenderana nemameseji emaemail avo, kumisikidza kukwidziridzwa, mameseji kubva kune vanobatsirwa nekambani kuti vaongorore.
Kutenda kushanduka iyo Gmail yakave nayo munguva dzino, tinokupa iwe, iyo
Zvimiro zvinoita kuti Gmail ive yakasarudzika,
Kuwana nekukoka: Chero mushandisi mutsva anogona kutumira kukoka kumapoka evanhu.
2.5 GB yekuchengetedza: Nepo mamwe mapuratifomu eemail achifanira kudzima maemail kuti ave nenzvimbo, Gmail inokupa iwe yekuchengetedza chinzvimbo.
Tsvaga: Kurumidza uye nyore kuwana mazwi akakosha kuti uwane email yaunoda.
Kuona kwekuona: Sarudzo iyo Gmail inoita izvo semushandisi iwe unogona kuisa yepashure mufananidzo kune iyo tsamba uye wozvigadzirisa.
Akatumirwa maakaunzi; Iwe unogona kuwana kubva kune yako wega tireyi, mune yemamiriro emakambani nharaunda, zita rinoitwa kune vamwe vanhu vanonyora vakamirira iyo yemakambani account.
Dhiraivha uye maDhizaini Zvishandiso: Unogona kuita zvinyorwa zvemabasa zvakachengetwa muGoogle Docs.
iOS kana Android: Unogona kushandisa Gmail pane ako mafoni se desktop desktop.
Labs: Iri ibasa kwaunogona kumisa kutakura mumasekondi makumi matatu kubva panguva yakatumirwa bhokisi. Labs ine runyorwa rweasarudzo uko iwe kwaunogona kugadzirisa iyo yemahara interface.
Hangouts Kutumira mameseji, GTalk: inokupa iwe chat uko vashandisi vanogona kutumira yavo mameseji kune avo vokukurukura uye kuita vhidhiyo mafoni.
Ronga email yako: Gmail inobvumidza mushandisi kuisa maemail avo nenzira yakarongeka, shandisa zvikamu zvezvavanoda zvakadai seMain, Kukwidziridzwa neSocial kana kuwedzera zvimwe zvacho sekuda kwavo.
Inokutendera iwe kuti mbeveve boka maemail kuti udzivise zvinokanganisa: Inokutendera kuti uvandudze meseji panguva yekutaurirana mausinga gashira zviziviso zvakananga.
Nyarara shinda ye email.
Vhura el meseji.
Dzvanya pane iyo sarudzo "Mute".
Gmail ine pani Preview: Kugonesa iyi sarudzo, iwe unofanirwa kugonesa maRabhani nekudzvanya pane kumisikidza maRabhosi uye tarisa sarudzo yekugonesa kuchengeta shanduko.